Maxaad ka ogtahay weriyayaasha cusub ee BBC Soomaali ku soo biiray? - BBC News Somali
BBC laanteeda afka Soomaaliga ku hadasha ayaa qaadatay weriyayaashii ugu badnaa ee hal mar la shaqaaleysiiyo, kuwaas oo ka kala yimid deegaannada Soomaalida.
Cabdullaahi Sheekh oo ah Madaxa Laanta af Soomaaliga ee BBC ayaa sheegay in tani ay bog cusub u tahay Idaacadda.
''Waxaa sharaf weyn oo aan la qiyaasi karin ii ah inaan soo dhaweeyo shaqaalaha cusub ee nagu soo biiray ee ka kala yimid dacallada degaannada Soomaalida, waxaana ka rajeynaynaa inay la'iman donaan fikrado cusub ayna soo gudbin doonaan sheekooyin aan horey loo maqal oo xiiso badan,'' ayuu intaas ku daray tifaaftirahu.
Image caption Fartuun Ismaaciil Axmed weriye ka tirsan BBC
Fartuun Ismaaciil Axmad, waxay ku dhalatay kuna soo barbaartay caasimadda dalka Soomaaliya ee Muqdisho. Waxbarashada hoose, dhexe iyo sare intuba waxay ku soo qaadatay isla magaalada Muqdisho.
Nairobi oo ay muddo ku nooshahay ayay ka bilawday xirfaddeeda saxaafinimo, waxayna si madax banaan ula soo shaqeysay idaacado badan, kadibna si joogta ah ula shaqeysay raadiyaha Damal oo xaruntiisu tahay magaalada tan Nairobi, taasoo 7-sano ay ka ahayd barnaamij soo saare iyo war akhriye.
Saddexdii bishii Jannaayo ee sanadkan 2019 ayey si toos ah ugu soo biirtay BBC laanteeda afka Soomaaliga.
''Farxad ayey ii tahay inaan ka mid noqdo shaqaalaha BBC-da oo ah hay'ad warbaahineed oo fac weyn, wariyeyaal waaweyn oo ku dayasho mudanna ay ka soo howlgaleen, waxaana rajeynayaa una balan qaadayaa in dhageystayaasha BBC-da aan usoo gudbin doono barnaamijyo xiiso badan oo ay aad ula dhici doonaan''.
Weriye Catoosh oo muddo sannad ah ka ruqseystay BBC
Wariyihii hore ee BBC-da oo geeriyoodey
Weriye shaqada ka tagay asagoo barnaamij TV toos u tabinaya
Image caption Xassan Sheekh Cumar oo ka mid ah shaqaalaha cusub ee BBC
Xasan Sheekh Cumar, wuxuu ku dhashay gobalka Hiiraan ee dalka Soomaaliya ,wuxuu ku soo barbaaray gobalkaas, waxbarashadisa inta badan wuxuu ku qaatay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya.
Warbaahinta wuxuu ku jiray in ka badan 10-sano, wuxuu barashada saxaafada ka haystaa shahaadada Diploma welina waxbarashada saxaafada ayuu wadaa.
Idaacado maxali ah ayuu ka soo shaqeeyay iyo Telefishinno. inta badan wuxuu ahaa war tabiye.
Sannadkii 2016-kii waxaa Telefishinka Horn Cable la'iiga aqoonsaday wariyihii ugu wanaagsanaa xafiiskii aan warbaahintaasi uga howlgalayay ee Nairobi.
''Waan ku hamin jiray inaan BBC-da laanteeda afka Soomaaliga ka shaqeeyo, waana ku soo biiray bilowgii sannadkan 2019-ka, waxaan u mahadcelinaya dhammaan madaxda iyo shaqaalaha BBC-da sida ay ii soo dhaweeyeen.''
Image caption Faadumo Taxadar Yusuf weriye ka tirsan BBC
Faadumo Yusuf Siciid (Taxadar) waxay ku dhalatay magaalada Ceerigaabo ee gobolka Sanaag. Waxa ay ku barbaartay oo ay waxbarashada aas-aasiga ah ee ilaa dugsiga sare kusoo qaadatay gobollada Sanaag iyo Barri.
Waxa ay kusoo biirtay warbaahinta sanadkii 2009kii, iyada oo muddo 10 sanno ah ka shaqeyneysay warbaahinta maxaliga ah. Faadumo waxa ay noqotay gabadhii ugu horreeyay ee agaasime iyo tifaftire ba ka noqota idaacadaha maxaliga ah ee Puntland ka howlgala. Waxa ay ku guuleysatay bilado dhowr ah.
Faadumo waxa ay la shaqeysay raadiyaha arrimaha bani'aadannimada ee Ergo intii u dhaxeysay 2015kii ilaa 2017dii. Waxa ay sidoo kale ka shaqeysay telefishino dhowr ah iyada oo ka shaqeyneysay telefishinka Horn Cable kahor inta aysan kusoo biirin BBCSomali saddexdii bisha Janaayo ee sanadkan 2019ka. Waxa ay sidoo kale Faadumo khibrad u leedahay muuqaal-duubidda iyo filim sameynta.
''Waxay ii tahay faraxad maadaama aan rumeeyey himilooyinkayagii mid kamid ah. Waxaan muddo hiigsanayay inaan mar uun ka mid noqdo shaqaalaha Idaacadda ugu faca weyn warbaahin afsoomaali ku hadasha ee BBC-da. Waxaan u soo gudbin doonaa dhegestayaasha idaacadda warbixinno xiiso galindoona''.
Image caption Kowsar Maxamed oo ka mid ah weriyayaasha BBC Soomaali
Kowsar Maxamed waxay ku dhalatay waxna ku baratay magaalada Wajeer ee waqooyi beri Kenya. Waxay jaamacad ka dhigatay magaalada Nairobi ee caasimada dalka Kenya.
Saxaafada waxay ku jirtaa ku dhowaad 4 sano, waxayna la soo shaqeeysay iddaacado maxali ah oo ka howl galla dalkani Kenya. muddo sannad ah ayey BBC-da ula joogtay si madax bannaan waxayna hada ka mid noqotay shaqaalaha BBC-da ay sannadkan cusub sida tooska ah uu qaadatay.
''Ruuntii waxaan ka soo gudbay caqabado badan oo aan aaminsanahay in cid walbo oo dadaasha ay ka gudbi karto, waan ku faraxsanahay inaan ugu dambeyn si toos ah uga mid noqday shaqaalaha BBC-da, waxaana si aad ah u rajeynayaa inaan dhageestayaasha usoo gudbin doono warbixino xiiso geliya''.
Image caption Cabdiraxmaan Cali Dhimbiil oo ka mid ah weriyayaasha cusub ee BBC-da ku soo biiray sannadkan cusub
Cabdiraxmaan Cali Dhimbiil, waxa uu ku dhashay Gobolka togdheer, gaar ahaan magaalada Burco. Waxbarashadiisa badankeedii waxa uu ku soo qaatay magaalada Burco. Culuumta saxaafadda waxa uu ka haystaa shaahadada Diploma. Cabdiraxmaan intii uu saxaafadda ku jirey waxa uu u badnaa warbaahinta qoraalka ah.
Ugu danbayn sannadkan ayaa uu ku soo biirey BBC, gaar ahaan laanta afka Soomaaliga isaga ka shaqo gelaya xarunta BBC-da ee Nairobi.